UZuma ngiyomthanda ngimhloniphe ingunaphakade – Ace Magashule – INSIMBI
EZEPOLITIKI FEATURED INSIMBI
UZuma ngiyomthanda ngimhloniphe ingunaphakade – Ace Magashule
July 9, 2021 July 12, 2021 Siphelele Xaba	0 Comments	Ace Magashule
Engxoxweni ende owabe enguNobhala we-African National Congress osamisiwe neNewzroom Afrika, u-Ace Magashule uthi uyomhlonipha futhi amthande ingunaphakade owabe enguMongameli kuleli uJacob Zuma otholoza ezikhindini zase-Escourt.
UMagashule uthi amalungu angempela kaKhongolose aba nesizotha avikele inhlangano ngazo zonke izimfihlo enazo ezingayiqumba phansi inhlangano uma zingaphuma. Uthi uMsholozi umhlonipha nje kunezinto esibucayi kakhulu azaziyo abantu abaningi abangazazi kodwa athule nazo ngoba uyazi ukuthi ukuphuma kwazo kungawukufa kombutho.
Uthe yena nabaholi be-ANC, okuhlanganisa kubo oMengameli abane abake baphatha uke waxoxa nabo ngalolu daba lukaZuma nabo banemizwa yabo futhi bayameseka uZuma. Uthi lowo osewuMengameli we-Economic Freedom Fighters, uJulius Malema wayeqotho kabi ngaphambi kokuthi avalelwe ekhoneni elagcina limphoqa ukuthi axebuke kuyo.
Uthe uZuma uzophuma kuleliya jele, uthemba futhi ufisa aphume ephila ewumqemane. Mayelana nesinqumo senkantolo sokuthi kwakungafanele amise owuMengameli wezwe manje uCyril Ramaphosa ekubeni yena wase emisiwe njengoNobhala, yase imgweba ukuthi akhokhe izindleko zecala, uthe ufaka i-appeal.
← UNtando Duma udume kabi kwezokuxhumana ethuka okhubazekile
Sebemsakaze ngomthofu izikhathi eziyisithupha ‘uRamaphosa’ →
Suspended Municipal Manager DD Naidoo departs after settlement with Ugu
April 30, 2021 April 30, 2021 Insimbi News Reporter	0